Umxube weHusky Malamute: Ngabe i-Alusky isilwane esihle somndeni? - Izinhlobo
Umxube weHusky Malamute: Ngabe i-Alusky isilwane esihle somndeni?
Isidlaliso njengo- Alusky , ukuxubana kukaHusky Malamute kungukuphambuka kwabantu abafuna umngani omkhulu, oshibilikayo kodwa abakwazi ukunquma phakathi kwezinja ezimbili zase-Arctic.
Ziyi-canines ekhazimulayo ezenza izilwane ezifuywayo ezinhle kakhulu zomndeni , okubenza babe abafundi be-A + lapho befunda imiyalo futhi bezama imisebenzi emisha.
Konke lokhu kuzwakala kukuhle kakhulu ukuba kube yiqiniso, kodwa funda ukuze uthole ukuthi ngabe yinja yakho yini!
Yini inja ye-Alusky?
Ngabe ukubukeka kwe-Husky Malamute kubukeka kanjani?
Isilwane somndeni esihle kakhulu esinobuntu obuqotho nobuthembekile
Ukuba ngumnikazi nokunakekela inhlanganisela ye-Alaskan Malamute Husky
Izinkinga zezempilo ingxube ye-Husky Malamute ingaba nayo
Ukuthenga: Ingakanani i-Husky Malamute mix puppy?
Okunye ukuxubana okumangalisayo kweSiberia Husky
Umxube weHusky Malamute ungumdlwane ophupha ebusika
Lokhu kuhlangana kuyisiphambano phakathi kwe-Alaskan Malamute neSuserian Husky. Bahlale benza iphutha njengohlobo olulodwa ngenxa yokufana kwabo, kodwa kukhona umehluko phakathi kwalokhu okubili .
Manje, inzalo yabo eyingxube ingenye yezengezo ezidumile emhlabeni wezinja zabaklami.
Izingxube ze-Husky Malamute zintsha sha endaweni yesehlakalo, kodwa okwaziwayo ukuthi kunjalo oklanyelwe i-sledding, ukuhudula, ukugijima, ukufaka inqola, nomsebenzi wokusesha nokutakula .
Abanye bathi badabuka e-US, kepha singathola okuningi ngalolu hlobo oluxubekile ngokufunda izinto ezimbalwa ezimayelana nabazali balo.
I-Alaskan Malamute enamandla
UHusky Malamute omangalisayo ehamba eqhweni
Izinhlekelele zase-Alaskan isichotho sasendulo e-Alaska. Babenjalo ekuqaleni okhuliselwe amandla namandla ukudonsa izihlibhi ezisindayo ngaphesheya kweqhwa.
Ngamahlombe anamandla nesifuba esijulile, abukeka aqinile njengoba enjalo.
Namuhla, bakleliswe endaweni yama-58 e-American Kennel Club's (AKC) ezizalela ukuthandwa futhi bayingxenye ye- Iqembu Lokusebenza .
Obeye aziwe njengo Ububi , lolu hlobo lunobuntu obuhlanganiswe ngokuphelele. Bayivikela kakhulu imindeni yabo, bayayenza izinja eziqaphile kakhulu , kodwa futhi zimnene futhi zinobungane.
Bayaziwa ukuthi badlala kahle kakhulu yize bebukeka bengaphandle.
Lolu hlobo olukhulu lunesisindo esingamakhilogremu angama-75 kuye kwangama-85 (34 kuya kuma-39 kg) futhi lungamasentimitha angama-58 kuye kwangama-25,5 ubude.
I-Husky yaseSiberia enhle futhi edlalayo
AbakwaSiberian Huskies angama-canine amahle avela eSiberia futhi futhi ayizinhlobo zasendulo. Mancane kancane kuneMalamute, anesisindo esingamakhilogremu angama-35 kuye kwangama-60 (16 kuya ku-27 kg) futhi amile amasentimitha angama-51 kuye kwangama-23.5 (51 kuya ku-60 cm).
Kade esetshenziselwa ukukhuthazela nokushesha ekuhambiseni izimpahla ezindaweni ezinkulu zeqhwa.
Inja enhle yaseSiberia yaseHusky
Abafuyi bamaHuskies babefuna ukudala inja eyayingumlingani futhi ingumjaho wezihlibhi. Manje sebengu-ice-pup abaziwayo ababalelwa ku-14 ohlwini lohlobo lwezinja oludume kakhulu lwe-AKC.
Bayathandwa futhi ngobuntu babo bokuzidla, nokuba nemvelo ephumayo futhi eqotho.
Masingakhohlwa okuyisisekelo se-Husky - ukubukeka kwabo okumangalisayo kwamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka. Lesi sici sisodwa sakha iziphambano ezimangazayo njenge UHorgi futhi UPomsky .
Njengabazali bayo, izici ezinjengezimpisi ze-Alusky ziqinisekile ukuthatha umoya wakho. Imvamisa zinezindlebe ezimile okwembenge, eziqonde ngaphezulu kobubanzi bazo.
Zinamehlo amise okwe-alimondi anomphefumulo futhi angaba nombala ogqamile, ogqamile oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama noma onsundu. Eminye inombala ohlukile esweni ngalinye.
Echosheni lesifonyo sabo eside kukhona ikhala elimnyama noma elinsundu. Ngakolunye uhlangothi lomzimba wabo ohlangene kunomsila onoboya obukhulu. Amahlombe abo amakhulu namahlombe aqinile abenza bacishe besabise njengempisi yangempela!
Yize amaklabhu adumile njenge-AKC engaziboni izinhlobo ezixubene ne-Alusky, ezinye izinhlangano ziyazibona izinhlobo ezixutshiwe ezifana ne- I-International Designer Canine Registry (IDCR), I-Registry Breed Registry (DBR), Inja Registry of America, Inc. (DRA), I-Designer Dogs Kennel Club (DDKC), kanye I-American Canine Hybrid Club (ACHC).
Imiksi ye-Husky Malamute izokwanda kangakanani?
Inhlanganisela ekhule ngokugcwele yaseSiberia Husky Alaskan Malamute ingafinyelela ubude be- Amasentimitha angama-20 kuya kwangu-28 (51 kuye ku-71 cm) nesisindo se- Amakhilogremu angama-45 kuye kwangama-75 (20 kuya ku-34 kg). Ezinye zingasinda njengamakhilogremu angu-45 .
Izinja ezinesilinganiso esiphakathi nendawo ukuya kwezinkulu ezifana nalezi akufanele zibekwe endaweni enabantu abaningi njengefulethi.
Badinga ikhaya elikhudlwana kunelisemaphakathi elinendawo evikelekile engaphandle ukuthi bangafinyelela noma kunini ukuze badlale noma bazulazule.
Le vidiyo izokunikeza umbono wokuthi ingxube yomdlwane we-Husky Malamute izothola kangakanani lapho isikhulile.
Ingubo nombala: Lindela i-pooch epholile futhi ephindwe kabili
Inja le obukhulu, obukhulu, ijazi elimbili kuyinto ukumelana namanzi neqhwa . Uboya babo buwasiza ukuthi afudumale ezimweni ezinzima zasebusika, ikakhulukazi ngoba zombili izinhlobo zabazali zivela ezindaweni ezinezimo ezibandayo kakhulu.
Ama-Malamute nama-Huskies anemibala efanayo nokumaka. Ngakho-ke inzalo yazo ehlanganisiwe itholakala kokumhlophe, isiliva, i-sable, grey, nsundu, nsundu ngokukhanyayo, igolide, ukhilimu, usawoti kanye nopelepele, futhi kwesinye isikhathi kufakwa okuluhlaza okwesibhakabhaka noma okubomvu okuncane emxube.
Amaski obuso nezimagqabhagqabha zamehlo kuyizinto okungenzeka ukuthi ukuxubana kweMalamute Husky kungazuza njengefa.
Uzibuza ukuthi i-Alusky iyi-hypoallergenic? Akunjalo. Banjalo ama-shedders alinganiselayo unyaka wonke, futhi bazokhipha okuningi ngesikhathi sokuwa nasentwasahlobo.
Umxube weHusky Malamute umngane ozinikele kanye nenja enkulu yokubuka - ngenxa yezwi likaHusky namandla okuqapha kaMal.
Ngokuvamile, bayizinja ezilinganiselwe kahle, ezinothando, futhi ezinesizotha, okusho ukuthi nazo kuhle ngezingane nezinye izilwane ezifuywayo . Bheka nje ukudlala ukugwema izingozi lapho wonke umuntu ezijabulisa kakhulu.
Kungenzeka ukuthi i-Alusky ibe ne- umugqa wokuvikela . Akufanele ukhathazeke kangako, kepha, ngoba bangaba nobungane nezivakashi inkosi yabo eyamukela ekhaya labo.
Banjalo nje okusolisayo ngokwemvelo , okuyikhwalithi enhle kakhulu kunoma yiluphi uhlobo.
Ekhuluma ngokuhlalisana kahle nawo wonke umuntu, isiphambano se-Alaskan Malamute & Siberian Husky yi- i-fido ehlakaniphe kakhulu efuna ukunakwa njalo nokudlala .
Ukuba nomngane onoboya kuzoba kuhle, kepha badinga umnikazi ongachitha isikhathi esiningi nabo futhi ahlinzeke ngenhlalo yokuqala nokuqeqeshwa - ukulalela, ikesi, imbiza.
Ezinyangeni zokuqala eziyisithupha zokuphila kwabo, kufanele bafunde imithetho eyisisekelo nemiyalo yasekhaya. Kepha yiba mnene ngenkathi uqine.
Nabo futhi uzwela kakhulu , ngakho ukuqiniswa okuhle kubalulekile. Izinja ezine 'background pack' zilangazelela umholi we-alpha. Uma ungazi ukuthi ungumphathi, kungaholela ekuziphatheni okungathandeki, njengokuhlafuna.
Abanikazi be-Novice bangase bakuthole kuyinselele ukuqeqesha lolu hlobo lokuxuba. Izinja ezihlakaniphile zivame ukuba nenkani, nokukhathazeka okudlangile kwabesilisa kunabesifazane.
Uyakhumbula lapho sincoma le canine ekhaya elinamagceke avikelekile?
Ngaphandle kwe- ukusebenza nokujwayela ukumba , bobabili oHusky noMalamute eyaziwa ngokugxuma kakhulu impela . Bangabalekela uthango olungamamitha ayisithupha, ikakhulu ngenxa yesithukuthezi.
Ngabe uHusky Malamutes uyathanda ukunganga?
Kuzoba nesikhathi abazokwenza ngaso - ngemuva kosuku olumatasa noma ukusebenza nokudlala.
Kuzala bani unamandla amaningi ingashesha ukubhoreka, ngakho-ke uma unganikeza ukukhuthazeka ngokomzimba nangokwengqondo abakudingayo nsuku zonke, lindela ukuthi ingane enoboya obujabulile ikugonwabe njalo ebusuku.
Ungamangali lapho ulungiselela ukulala nokukhala komngane wakho we-canine. Ngenxa yozalo lwabo lwempisi, bavame ukukwenza kakhulu lokho. Uma lokhu kungeyona inkinga kuwe, kungenzeka kube komakhelwane.
Enye yezinto ezibalulekile okufanele uzicabangele ngaphambi kokuthola le nja yomklami indawo yakho.
Yebo, i-Alusky ingahlala emazweni noma ezifundeni ezihlala zishisa njalo, kepha akusho ukuthi le ndlela enqamulelayo izonethezeka kuleso simo esiphilayo. Lokho kusiletha esikhathini esichithwa ngaphandle.
Ukuzivocavoca: Lungela ukwehla kusofa
Izingxube zeHusky Malamute ziyizo izinja ezisebenzayo ezidinga ukuzivocavoca imizuzu engama-60 kuya kwengu-90 nsuku zonke . Uma ucabanga ukuthi ungasisebenzisa sonke leso sikhathi ngokuhambahamba nje endaweni yangakini, cabanga futhi.
Izinhlobo ezihlakaniphile azikuthokozeli ukwenza into efanayo kaninginingi. Hlanganisa imisebenzi ngokubandakanya ukuhamba ngezinyawo, ukugijima, ukubhukuda, izifundo zokuzivocavoca, nokulanda ku-ajenda.
Ukunakekelwa kwenja yezinja kuyisinqumo esihle kakhulu uma udinga ukuphila nge-fido yakho ihora noma amabili, okuyisiza ukuthi ithole ukuzivocavoca kanye nokuzijabulisa okudingayo.
Uma usufikile ekhaya futhi isilwane sakho sisabonakala sengathi besingakwazi ukuhlala phansi okwamanje, sincoma ukuthi unike i-Alaskan Malamute-Husky mix yakho eminye imidlalo yobuchopho, efana puzzle amathoyizi , ukugcina ukuzijabulisa kwakhe.
Uma ubheka ukwanelisa isidingo senja yakho yokumba, abanye abanikazi bakha i-sandbox ngaphandle. Bheka le vidiyo kaGohan the Husky ezijabulisa kangaka! Ungayenzela i-Alusky yakho eyodwa, futhi.
Njengoba kunjalo izwela ukushisa nomswakama , nciphisa inani lesikhathi sokudlala sangaphandle phakathi nezinyanga zasehlobo.
UHusky Malamutes kukhona othambekele ekukhuluphaleni ngokweqile uma ungasetshenziswanga ngokwanele, ngakho-ke qiniseka ukuthi unesikhathi sokunikeza ingane yakho lokho akudingayo.
Ukudla kwenja kufanele ukondle i-Alusky yakho
Amamiksi kaMalamute Husky azodinga Izinkomishi ezi-3 kuye kwezi-5 zama-kibbles ezomile zihlukaniswe kabili ukudla ngosuku . Qinisekisa ukuthi i-pup yakho ithola umsoco ofanele ngokunikeza ukudla okususelwa kusisindo sayo, ubudala, imetabolism, kanye nempilo.
Iya ku- iresiphi eyenzelwe izinhlobo ezinkulu nezinkulu lokho kuzosiza ukulawula ukukhula kwamathambo ngokushesha. Babuye bathambekele ekukhuluphaleni, ngakho-ke namathela esimisweni sokudla bese uvikela ukunikela ngezicucu zethebula.
Enye yezinzuzo zokudla kwenja eyomile ukugcina amazinyo nezinsini zenja kuhlanzekile futhi kunamandla. Ungangeza ukuphatha amazinyo okunempilo njengokudla okulula kwansuku zonke kwesilwane sakho, nakho.
Ukuzilungisa: Ingabe inja ye-Alusky isezingeni eliphezulu?
Ngabo bonke loboya, a Ukuhlanganiswa kwe-Husky Malamute kunguhlobo olulinganiselayo kuya olusezingeni eliphakeme . Kudingeka babe ibhulashi kabili kuya kathathu ngesonto nge ibhulashi le-slicker ngaphezulu kwe- iphini ibhulashi ukugcina izingqinamba nokungcola kungasebenzi.
Lapho izikhathi zishintsha, futhi bashaya amajazi abo, kungcono ukusebenzisa i- umchithi nsuku zonke ukunciphisa ukuchitheka.
Uma i-pooch yakho ivame ukungakhululeki noma nini lapho ikama noma ibhulashi lithinta uboya balo, ukuqeqeshwa kokungahlehlisi impendulo.
NjengoSuserian Husky no-Alaskan Malamute, i-Alusky iyi- inja ehlanzekile uma kuqhathaniswa ngoba izuze imikhuba emihle yenhlanzeko yabazali bayo . Lokho kusho ukuthi unganikeza uboya bakho ingane a ukugeza njalo emavikini ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili .
Asikho isidingo sokuchithwa ngokweqile ngoba kuzolimaza kuphela amafutha emvelo wejazi lakhe.
Sebenzisa i i-anti-shed shampoo ne-conditioner equkethe i-aloe, oatmeal, ne-pH engathathi hlangothi.
Izindlebe kufanele zihlolwe futhi zihlanzwe masonto onke, ikakhulukazi ngoba inhlanganisela yeHusky Malamute ijwayele ukwakha i-wax. Sebenzisa kuphela i- isixazululo sendlebe eqondene nenja namabhola kakotini, angalokothi abe yi-Q-tips.
Ungakhohlwa inhlanzeko yomlomo! Xubha amazinyo wesilwane sakho okungenani kanye ngesonto bese usika izinzipho lapho uzizwa zicindezela phansi.
Uma uhlala endaweni efudumele kwenye indawo kanti i-Alusky yakho iqhekeke izidladla, uVaseline uyindlela elula nokho esebenzayo.
Isiphambano saseSiberia i-Husky ne-Alaskan Malamute siwuhlobo olunempilo ngokuqhathaniswa isikhathi seminyaka eyi-10 kuya kwengu-14 , kodwa abanye bajabulela isikhathi sokuphila esifinyelela eminyakeni eyi-15.
Ngeshwa, zonke izinhlobo zingaphathwa yizifo ezahlukahlukene, noma ngabe kungu-purebred noma i-crossbreed. Isikhathi esiningi, ingazuzwa njengefa kubazali bayo.
Kungaba ngcono uma ubheka izindaba zezempilo ezinjenge-hip dysplasia, bhabha , i-myelopathy ewohlokayo, i-polyneuropathy , Izifo zikaVon Willebrand, nezimo zamehlo njengeProgressive Retinal Atrophy (PRA).
Lokhu akusho ukuthi ingxube yakho ye-Husky Malamute izothola zonke lezi zifo. Abanye bathi izinja zabaklami ziphilile kunezibalo ezingenacala ngenxa ye- amachibi ezakhi zofuzo ahlukahlukene .
Siyazi ukuthi uzozinakekela futhi unikeze konke okuzodingwa yinja yakho - ukudla okunempilo, ukuzivocavoca umzimba, kepha umthelela omkhulu ekutheni wena nomntwana wakho nizojabulela isikhathi esingakanani nenkampani yomunye nomunye kuzoya ngokuthi bavelaphi.
Izingxube zeHusky Malamute ziyizo akuvamile , okuyisici sentengo yabo ukuthi ikhuphuke, ngaphandle kokutholakala komdlwane, indawo yomfuyi, kanye nokuthandwa kwamakhaya. Umdlwane we-Alusky ungabiza cishe ama- $ 1,000 .
Futhi ungakhohlwa ukuthatha izindleko ezengeziwe zonyaka, zombili ezokwelapha ($ 400 kuye ku- $ 500) futhi ezingezona ezokwelapha njengokudla, amakesi , leashes , namathoyizi ($ 300 kuya ku- $ 500) kubhekelwa, kanye nokuningi ngezindleko zokuqeqesha nokulungisa.
Abafuyi bokuxuba abakwaHusky Malamute
Lapho ufuna imidlwane ye-Alusky ethengiswa online, qiniseka ukuthi yenza ucwaningo olunzulu bese ubuza abathengisi bemidlwane imibuzo mayelana nenqubo yabo, njengokunikeza iziqinisekiso zezempilo zezinsana zabo.
Impendulo evela kumfuyi ohloniphekile iyohlala ikhona yebo .
Enye into okufanele uyiqaphele ukuthi bazimisele yini ukukwazisa kumama nobaba noma cha, noma ngabe banakho vakashela isibaya .
Abafuyi abanomthwalo wemfanelo abanakekela izinja zabo basobala ngoba bafuna ukwenza isiqiniseko sokuthi imidlwane iya ekhaya nabantu abafanele.
Bazofuna ukwazi abathengi abangaba khona futhi benze izingxoxo ngaphambi kokunikeza umdlwane.
Usukulungele ukuqala usesho lwakho? Inkazimulo yaseNyakatho (ILyons, MI) banemikhiqizo etholakalayo yokuxuba imidlwane yabantu abadala kanye nabantu abadala. Uma uhlala ku-Facebook, hlola Ikhasi likaMiller uma bethengisa lesi siphambano.
Ukuthola i-Alusky yokutholwa
Enye yezinketho ezinhle kakhulu lapho ufuna inja, ikakhulukazi izinhlobo ezihlanganisiwe, ukusebenzisa.
Ngaphandle kokubheka izindawo zokukhosela eziseduze kwakho, izinhlangano ezithile zokutakula zeSiberia Huskies kanye ne-Alaskan Malamutes ziyizindawo ezinhle ongabheka kuzo ngoba zinakekela izingxube zazo.
Dlulisa amehlo kumxube weHusky noma we-Malamute la mawebhusayithi akunikezayo, futhi ungathola i-Alusky:
Ukuhlengwa kwe-Arctic (I-Provo, UT)
I-Howling Woods Farm (UJackson, NJ)
I-Washington Alaskan Malamute Adoption League (ISpokane, WA)
Noma ngabe uzizwa sengathi ukuxubana kweHusky Malamute akuyona eyakho, noma umane ufuna ukwazi ukuthi yiziphi ezinye izinja ezingumklami ezadalwa kusetshenziswa amaSiberian Huskies, nalu uhlu lwalezo zinhlobo ezixubile:
Ukuhlanganiswa kwe-German Shepherd Husky (AKA Gerberian Shepsky)
Ukuhlanganiswa kwe-Husky Lab (AKA Huskador)
Ukuhlanganiswa kukaPitbull Husky (AKA Pitsky)
Ukuhlanganiswa kwe-Golden Retriever Husky (AKA Goberian)
Ungaphuthelwa : 23 Ukuxuba kwe-Malamute: Yikuphi okuyi-crossbreed okuhle kakhulu kuwe?
Ngabe ubulokhu ufuna ukuba ngumnikazi wempisi ethambile? Lapho-ke i-Alusky ingahle ibe seduze kakhulu ongayithola. Bangama-fluff-balls amahle futhi abangane abakhuthele .
Banobuntu obumangazayo - izinja eziqaphile, ezinogada ezinothando lokupha, futhi ilungele imindeni enezingane nezinye izilwane ezifuywayo .
Uma uhlala endaweni ethile lapho kuvame ukubanda khona, awuguliswa yizinwele ezifuywayo, futhi wena kanye nomakhelwane bakho ngeke niyikhathalele i-doggo ekhalayo, ngakho-ke ukuba nale fido ngeke kube yinkinga.
Ngabe uzizwa sengathi ukuthole okudingekayo ukunakekela inhlanganisela ye-Husky Malamute? Sazise ngakho ngokushiya amazwana ngezansi.
I-Puppy Weight Calculator: Ingakanani I-Puppy Yami Ezoba Nkulu Kangakanani?
Yini i-Boggle Dog: Ukubheka ku-Boxer Beagle Mix
pitbull hlanganisa nemidlwane yesibhakela
ujack russell terrier nomxube we-chiwawa
amagama ezinja zesifazane ezinja ezimhlophe
ibukeka kanjani i-shih tzu poodle